Japanese zimali mfihlo ungase ubhekane 55% intela ku inzuzo - Blockchain Izindaba
Japanese zimali mfihlo ungase ubhekane 55% intela ku inzuzo
National Tax Agency yaseJapane wabusa ngonyaka odlule ukuthi inzuzo etholakale kwi cryptocurrency abathengisa kukhona uhlobo “engenayo oxubile,” zimali manje kudingeka ukuthi usho inzuzo yabo yonyaka intela imvuthuluka Febhuwari ngenxa. 16-Mashi 15.
Ngokungafani ambikele ku Amasheya Nama zezimali angaphandle, zazo intela emhlabeni 20 amaphesenti, Levy Japan ku inzuzo ngemali virtual esiqala 15 amaphesenti amabili kuya kwamahlanu 55 amaphesenti. Inani phezulu kusebenza nomholo wonyaka we 40 million yen ($365,000).
Njengoba bengenandaba inzuzo etholakale intela ezitshaliwe eside e imali virtual kwezinye izindawo kuhlanganise Singapore, nedlanzana zimali cryptocurrency-ocebile kakade washiya Japan, wathi Kengo Maekawa, esiphezulu Shiodome Partners Tax Corp.
Amandla wemali engenayo ezibuthezela uhulumeni Japanese kungaba abalulekile. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule mayelana 40 amaphesenti bonke ukuhweba Bitcoin bekulokhu ngokumelene yen.
Okwamanje, ejensi lentela ukudala i-data base ku cryptocurrency zimali kanye amaqembu ngokusekelwe eTokyo futhi Osaka kuthiwa ekugcineni eduze iwashi ukuhweba ngogesi.
Mt.Gox umphatheli sekudayiswe 35,841 BTC phakathi
Mt.Gox umphatheli has s ...
Ukunganakwa sokuphepha ...
Thumela Previous:wezeziMali Thailand: Uhulumeni ngeke zivimbele cryptocurrency zokuhweba
Thumela Landelayo:Cryptocurrency exchange BitGrail umemezela ngongakwazi ukukhokha izikweletu ngemuva Hack